Luyini uhlelo lweCommunity College Cannabis Vocational Pilot Programme e-Illinois?
Uhlelo lomshayeli womphakathi we-Community College insangu e-Illinois lwenzelwe ukuqeqesha ochwepheshe abazophatha imboni yensangu ngokuzayo.
Konke Odinga Ukwazi Ngehlelo LaseCanabus Cannabis Vocational Pilot Programme e-Illinois
Yiluphi uhlelo lweCommunity College Cannabis Vocational Pilot Programme e-Illinois?
The I-Community College Cannabis Vocational Pilot Program e-Illinois kwenzelwe ukuqeqesha ochwepheshe abazophatha imboni ye-cannabis ngokuzayo. Ikolishi lomphakathi kuleli cala lisho noma iliphi ikolishi lomphakathi.
Ukuze umthetho we-cannabis wase-Illinois wenziwe ngempumelelo, kunesidingo sokuqeqesha abantu abazosebenza embonini. Lababantu ngeke baqeqeshelwe umthetho kuphela, kepha bazoholwa nokuthi bangawuphatha kanjani amabhizinisi e-cannabis.
Nakhu okudingeka wazi:
Ukuphathwa kohlelo lwe-IL Cannabis
UMnyango wezoLimo uzobe uphethe uhlelo lokuphatha uhlelo lokushayela izindiza emphakathini okwenziwa amakolishi emphakathini. Ngesikhathi umthetho uqala ukusebenza ngoJanuwari 2020, umnyango wezolimo uhlose ukuthola amalayisense okungenani wezinhlelo eziyi-8 kumakholiji omphakathi kuhulumeni.
Ngo-2021, amakolishi asezovele enamalayisense okunikeza uhlelo lwe-cannabis azovunyelwa ukuqala ukuqeqesha abafundi abanentshisekelo. Inhloso lapha ukulungiselela abafundi ukuthi bangene embonini ye-cannabis. Ukuqeqeshwa kuzobhekelwa kakhulu kwezamabhizinisi nakwimisebenzi yobungcweti, kanye nezingqinamba zezomthetho abadlali okufanele bazazi mayelana nazo.
Akuwona wonke umuntu ozovunyelwa ukwenza uhlelo lwe-cannabis. Bonke ababambiqhaza kuzodingeka okungenani babe neminyaka eyi-18 yobudala ukuze babhalise kulokhu kuqeqeshwa. Ngaphezu kwalokho, kuzoba nezitifiketi ezinikezwa amakolishi omphakathi kulabo bantu abathola ngempumelelo ukuqeqeshwa kokuthi bangawaphatha kanjani amabhizinisi e-cannabis.
Ukukhishwa Kwamalayisense Ohlelo Lokushayela Insangu Yomphakathi I-Cannabis Vocational IL
Kuzokhishwa amalayisense kusukela ngonyaka ka-2020. Wonke amakolishi anesifiso sokunikela kule nkambo kuzodingeka ukuthi afake izicelo zawo zamalayisense ngoJulayi 1 2020. Amalayisense azonikezwa ngokufanele, umnyango wezolimo uzohlinzekwa nge isibopho sokuza nohlelo lokukala abafake izicelo zamalayisense. Ezinye izinto ezizodingidwa zibandakanya:
Sula uhlelo lwezifundo
Isipiliyoni sobungcweti kwezinsangu nasemasimini ahlobene
Amalayisense ayi-5 azonikezwa izikhungo ezinabafundi abathola imali ephansi ngamaphesenti angama-50
Izinyathelo zokuphepha zibekiwe ukuqinisekisa ukuthi izitshalo nemikhiqizo ye-cannabis azihlali ezandleni ezingafanele.
Uhlelo lokubekwa kwabafundi abahamba ngempumelelo ngalolu hlelo
Izidingo Zenqubo Yezinhlelo Zekilabhu YaseCanabis Vocational Pilot
Izikhungo ezizothola imvume yokuqhuba uhlelo lokushayela izodingeka ukuthi zilandele eminye imithetho. Okokuqala, isikhungo ngeke sivunyelwe ukuba nezitshalo ezingaphezu kuka-50 zensangu ngesikhathi sokuqhakaza nganoma yisiphi isikhathi. Akukho sitshalo noma umkhiqizo waso ozothunyelwa esikhungweni ngaphandle kokuthi amasampula ayiswa lab. Ngaphezu kwalokho, ikolishi kuzofanela liqoke i-ejenti eligcina i-vault log yabantu abangena esikhungweni se-cannabis. Ezinye izidingo zifaka:
Ukufinyelela endaweni ekhulayo insangu kuzonqunyelwa. Ikharikhulamu izotholakala kuphela kulabo abathatha isifundo se-cannabis
Inkampani yezokuthutha kuzodingeka ukuthi inikezwe inkontileka yokuhambisa imikhiqizo ye-cannabis kusuka ekolishi lomphakathi iye kwelabhu.
Yonke imikhiqizo ye-cannabis engapheli kulebhu kufanele ichithwe kungakapheli amasonto ayi-5 ngemuva kokuba ivuniwe.
Ummeli we-faculty kufanele abe esikhungweni se-cannabis ngaso sonke isikhathi noma kunini lapho kukhona umfundi. Umthetho uthi, "Asikho isitshudeni esibamba iqhaza ezifundweni zensangu esidingekayo ukuthola isitifiketi esingahle sibe sesikhungweni selayisensi ngaphandle kwalapho i-ejensi ephethe ubuhlakani nayo itholakala ngokomzimba."
Ukuhlolwa kanye nokuhlolwa okungahleliwe ngamaphoyisa
Abezolimo kanye nomnyango wamaphoyisa wombuso banelungelo lokwenza amasheke okungahleliwe kulezi zikhungo. Ukuhlolwa okungahleliwe kuzobekwa kuphela ezindaweni lapho zitholakala khona izindawo ze-cannabis.
Ungayithola Kanjani Ikhadi Lokuhlonza Umenzeli We-Faculty
Umuntu kufanele afake isicelo futhi akhokhe imali engabuyisi ukuze anikezwe ikhadi lokuhlonza i-ejenti yobunikazi. Ikhadi lizodinga ukuvuselelwa ngezikhathi ezithile. Umuntu ngamunye uzokwazi ukuthi ikhadi labo livunyelwe noma lenqatshiwe ezinsukwini ezingama-30 ngemuva kokuthumela isicelo sabo. Kubalulekile ukuqaphela ukuthi wonke amadokhumenti afanele adinga ukuhanjiswa ukuze uhlelo lokusebenza luqhubeke.
Lapho isicelo sesivunyiwe, umenzi wesicelo uzothola ikhadi lokuzazisa le-ejenti kungakapheli izinsuku eziyi-15 kusukela ngosuku lokuvunywa. Umenzeli kuzodingeka ukuthi aqhubeke nekhadi libonakale inqobo nje uma esesikhungweni esivaliwe, "Noma izikhungo asebenzela zona."
Imininingwane equkethwe ekhadini lokuhlonza ifaka:
Igama lomnikazi wekhadi
Usuku ekhishwe ngalo ikhadi
Isikhathi sokuphelelwa kwekhadi
Inombolo yokuhlonza i-alphanumeric. Le nombolo izoqukatha izinombolo eziyi-10 okungenani nezinhlamvu ezi-4 nezinombolo ezi-4
Izithombe zomnikazi wekhadi
Igama lekolishi lomphakathi lapho kuqashwa khona umnikazi wekhadi
Kwenzekani uma Umthetho Waphukile?
Umnyango wezoLimo uzoba nelungelo lokubuyisa noma iliphi ikhadi le-ejensi ye-faculty uma zingalandeleli imithetho njengoba kuchaziwe emthethweni we-cannabis. Ilayisensi yohlelo nayo ingachithwa uma yephula noma yiziphi izindatshana ezikulo mthetho. Umthetho ubuye uthi, "Ibhodi lizobuyisa igunya lokunikeza isitifiketi sanoma iliphi ikolishi lomphakathi elithe ilayisensele noMnyango selichithiwe"
Umbiko Wenqubekela phambili wokuSebenza kohlelo lwe-IL Cannabis Pilot Program
Ngokomthetho wase-Illinois, "NgoDisemba 31, 2025, umphathi we-Illinois Cannabis Regulation Oversight Officer, ngokubambisana neBhodi, kufanele akhiphe umbiko kuRubhuluneli kanye noMkhandlu Kazwelonke". Okunye okuqukethwe kulo mbiko kuzoba:
Izigameko zokuphepha zifakaze kuzo zonke izindawo ezinamalayisense. Kufanele futhi kube nemininingwane eyanele yokuthi yiziphi izinyathelo ezathathwa ezikhungweni lapho kwaqoshwa khona lezi zigameko.
Izibalo zabafundi ababhalise kunoma yiluphi uhlelo oluhlobene ne-cannabis. Lezi zibalo kufanele zisuselwe kubulili, ubuzwe, kanye nekolishi lomphakathi.
Isibalo sabafundi abaphothule ngempumelelo uhlelo lwe-cannabis ezikhungweni ezahlukene ezinamalayisense
Izibalo ngokubekwa kwemisebenzi kwabafundi ngemuva kokuphothulwa kwezinhlelo
Uma ufisa ukuba yingxenye yeCommunity College Cannabis Vocational Pilot Programme e-Illinois, kufanele ukhulume nommeli onolwazi ozokusiza uqonde izidingo ezidingekayo ngokomthetho futhi ukuqondise kwinqubo yokufaka isicelo.